निशान न्युज आश्विन २८, 2074
उदयपुर । दशैँ मनाउन एक हप्ता अगाडि नै घर हिँडेका उदयपुर जिल्ला अस्पतालका डाक्टर अन्य सरुवा मिलाएर गएपछि अहिले जिल्ला अस्पताल उदयपुर डाक्टरविहीन बन्न पुगेको छ । अस्पतालमा डाक्टर नभएपछि अधिकांश बिरामीलाई अहिले अन्यत्र सिफारिस गरी पठाउन बाध्य हुनुपरेको बिरामीका आफन्त बताउँछन् । अस्पताल प्रमुख ड...
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयनुवाकोटमा गर...
आश्विन २७, 2074 नुवाकोट । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोटले गर्भपतन सेवा निःशुल्क बनाएको छ । तेस्रो सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसको अवसर बनाएर स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत प्रवाह हुँदै आएको गर्भपतन सेवा बिहीबारदेखि निःशुल्क गरेको हो । गर्भ...
मौसमी रुघाखोकी बढ्दै जाँदा १७ मृत्यु
आश्विन २६, 2074 काठमाडौँ । मौसमी रुघाखोकीका कारण हालसम्म १७ जनाको मृत्यु भएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार अक्टुबर महिनासम्म ३ हजार १०१ बिरामीमा जाँच गर्दा १ हजार २९१ जनामा मौसमी रुघाखोकी देखिएको थियो । यसमध्ये १७...
रामेछापको गेलुमा स्वास्थ्य शिविर, ५ स...
आश्विन २५, 2074 रामेछाप । रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर १२ गेलुमा स्थानीय एक सामाजिक संस्थाले स्वास्थ्य शिविर राखेको छ । कालिन्चोक फाउण्डेशन नेपालले संचालन गरेको स्वास्थ्य शिविरमा गेलु, फुलासी, चनखु लगाएतका ठाउँबाट आएका ५ स...
आँखाको नानी प्रत्यारोपण र संकलन कार्य...
आश्विन २५, 2074 चितवन । मेडिकल सिटीका रुपमा विकास हुँदै गएको जिल्लामा आँखाको नानी संकलन र प्रत्यारोपण शुरु गरिएको छ । भरतपुर आँखा अस्पतालले आँखाको नानी प्रत्यारोपण गरिसकेको छ भने नानी संकलन कार्य यसै साताबाट शुरु गर्नका लागि तयारी गरिरहेक...
स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलकै गृहनगर बर्द...
आश्विन २५, 2074 महोत्तरी । स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलकै गृहनगर बर्दिबासमा डेंगुका विरामी बढेका छन् । बर्दिबासमा डेंगु रोगको संक्रमण नियन्त्रणमा हुन नसक्दा जिल्लामा त्रास फैलिएको छ । महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासमा ५ जनाबाट शुरु भएको...
अस्पतालमा डाक्टर नभएपछि बिरामी मर्कामा
आश्विन १५, 2074 काठमाण्डौ । बडादशै हिन्दुहरुको महान पर्व हो । त्यसैले यतिबेला मानिसहरु दशै मनाउन आफ्नो गाउँघर जाने, साथीभाई भेट्ने,आफन्तहरुलाई भेटघाट गर्नेै गर्छन् । आफन्तहरुसंग भेटघाट गर्ने , खुसियाली मनाउने यो महत्वपुर्ण अवसर हो । त्यसै...
आश्विन १४, 2074 काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रोहवरमा शुक्रबार नेपाल चिकित्सक सङ्घ र सरकारी पक्षबीच भएको वार्तामा चारबुँदे सहमतिसँगै चिकित्सकले अस्पतालमा जारी राखेको हडताल अन्त्य गरेका छन् । सबै चिकित्सकहरु शुक्रबार देखी नै अ...
आश्विन १२, 2074 चितवन । वडादशैँको आज आठौँ दिन महाअष्टमी देशभरका शक्तिपीठ र घरघरमा बलि दिएर मनाइँदैछ । देवीलाई बलिसँगै बोका, राँगा, कुखुरा लगायतको बढी नै मासु उपभोग गर्ने गरिन्छ । तर यसरी मासु खाँदा सावधानी अपनाउन सकिएन भने मासुले रमाउने ...
डा. केसीको १२ औं अनसन स्थगित
आश्विन ११, 2074 काठमाडौं । पटकपटक अनसन बस्दै आएका प्रा.डा. गोविन्द केसीले १९ गतेसम्म १२ औं अनशन स्थगित गरेका छन् । उनले २० गतेदेखि पुनः अनसनमा बस्ने बताएका छन् । डा. केसीले माफियामूखी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न लागेको आरोप लगाउँदै...
यो देशमा सरकार छ कि छैन ? : डा. श्रेष्ठ
आश्विन १०, 2074 काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्ति श्रेष्ठले सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनप्रति कुनै गम्भिरता नदेखाएको गुनासो गरेका छन् । उनले स्वास्थ्यकर्मीको मागलाई तत्काल पूरा गर्न सकिने भएपनि सरकारले त्यसलाई वेव...
१ हजार ८ सय ६१ बालबालिका कुपोषित
आश्विन ८, 2074 नुवाकोट । नुवाकोटका १ हजार ८ सय भन्दा बढी बालबालिका कुपोषणबाट ग्रस्त भएको पाइएको छ । ख्याउटेपन भएर बच्चाको तौल न्यून हुँदै मृत्युवरणसमेत गर्ने जोखिम अवस्थाको शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकाको संख्या ३ सय ५ र मध्यम कुपोषण भएका...
आश्विन ६, 2074 आश्विन ६, २०७४-विभिन्न स्थानका १० मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पताल सरकारको स्वीकृतबिनै सञ्चालनमा रहेको खुलेको छ । सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिकाविपरीत यी मेडिकल कलेज सञ्च...
नवलपरासीमा ४९४ एचआइभी संक्रमित
आश्विन ४, 2074 नवलपरासी । नवलपरासीमा हालसम्म ४ सय ९४ एचआइभी संक्रमित देखिएको छ । एचआइभी संक्रमितको उपचार र हेरचाहका क्षेत्रमा सन् २००७ बाट जिल्लामा कार्यरत संस्था लुम्बिनी प्लसकाअनुसार शुरुमा ३४ संक्रमित फेला परेकोमा २०१७ सालसम्म आइपुग्...
बिरामीको उपचार गर्ने सगरमाथा अञ्चल अस...
आश्विन ३, 2074 सप्तरी, । बिरामीको उपचार गर्ने सगरमाथा अञ्चल अस्पताल आफै अस्वस्थ भएको छ । अस्पतालमा १८ चिकित्सकको दरबन्दी रहेकामा हाल ३ चिकित्सक मात्र कार्यरत छन् । अन्य करिब २५ प्राविधिक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पद रिक्त भएको कारण उपचारका ल...
← अघिल्लो 12… 62 63 64 65 66 67 68 69 70 … 73 74 पछिल्लो →